Ngwọta maka bedbugs: fenaxin, fas, delta mpaghara, chlorophos, ebulu, wdg. - Ụlọ, ụlọ - 2020
Enweghị nkịta! N'ihe banyere ebe akwa bedbugs nke oge a
Maka mkpochapụ nke ụlọ ntanetịpụtara ọtụtụ n'ime ụmụ ahụhụ. Ka anyị tụlee ya nnukwu ọtụtụ ọgwụ, na-atụle ọganihu ha niile.
Blockbuster - XXI
Ngwa mmiri na-agụnye nchikota atọ pyrethroid.
Medilis site na bedbugs na-ebibi dum n'ógbè nke bedbugs na otu ọgwụgwọ.
Ozugbo njikere iji.
Oge nchebe dị ihe dịka ọnwa abụọ.
Ọ bụghị ụmụ mmadụ na-egbu egbu.
Na-ekpochapụ ọbụna ụmụ ahụhụ ndị mepụtara na-eguzogide ụmụ ahụhụ ndị ọzọ.
Ọnụ elu (389 rubles maka 250 ml).
Kedu ka esi etinye?
Mkpịsị nsị na-ekpuchi ebe obibi ọ bụla maka bedbugs ma pụọ ​​n'abali. Na ụtụtụ, ịkwesịrị ikpochapụ ụlọ ahụ ma kpochapụ ya na ngwọta ncha na soda.
Medici Antiklop foto:
Akwukwo mmiri nke nwere neonicotinoid acetamiprid na-etinye uche na pasent 5.
Jiri nlezianya kpochapụ nkwụchi ndị na-eguzogide ọgwụ.
Otu otu usoro zuru oke iji bibie obodo.
Ngwá ọgwụ ọjọọ (300 rubles kwa 50 ml).
Tupu e jiri ya mee ihe, a ghaghị ịmegharị uche na mmiri.
Gbalịa ka ị na-atụgharị mmiri dị jụụ dị na 1:10. Mgbe ahụ, tinye n'ime karama ma kpochapụ ebe niile enyo. Ihe ngbochi maka bedbugs Ihe ngbochi ahụ malitere ime mgbe ị na-ejikọ ya.
Foto nke Blockade ọgwụ:
Aerosol bu n'obi ikpochapu ihe ngbochi ndi mmadu nile.
Ngwá ngwongwo Bbubsterter nwere ihe atọ na-arụsi ọrụ ike.
A na-edozi karama ahụ na ederede nke dị ogologo nke na-enye gị ohere ịkwanye ngwá ọrụ ahụ n'ime nkuku siri ike.
Ọ na-amalite ime ozugbo na kọntaktị na bedbugs.
Ọ dị ọnụ ala (180 rubles maka 400 ml).
Otu cartridge adịghị ezu iji nweta ọbụna ụlọ nke otu ọnụ ụlọ. Nri 1 karama nke mita 26-27. m
Anyị ga-emegharị usoro mgbe 7-8 ụbọchị.
Enweghị oge nchekwa.
Ọ na-adị mfe iji ọgwụ mgbochi ọrịa mee ihe. O zuru ezu iji kpoo ngwaahịa a na-enyo enyo wee hapụ otu awa. Mgbe ọgwụgwọ gasịrị, gbasaa ụlọ.
Foto nke ọgwụ Blockbuster:
Organophosphate nkwadebe maka mkpochapụ nke dum mgbagwoju nke ụlọ na n'ogige pests.
Nnukwu ahụhụ ụmụ ahụhụ (.
Ọ bụ akụnụba. A na-atụgharị ampoule n'ime lita 10.
Nlekọta maka bedbugs Vofatoks nwere ike na-esi ísì ụtọ ísì.
Mbụ ịkwesịrị ịkwadebe ngwọta ọrụ.
Ghọta ampoule (5 ml) na ịwụ nke mmiri nkịtị, wụba n'ime akpa nwere iko ma kpoo ebe obibi nke ahụhụ. Hapụ ịkwadebe maka ọtụtụ awa ma ọ bụ n'abali, wee kpoo ebe ahụ ma saa ngwaahịa ahụ na ngwọta nke soda na ncha.
Foto nke Wotafox ọgwụ:
Ọgbara ọhụrụ nke ọgwụ na-edozi ahụ. Isi ihe - deltamethrin, na-ebibi ọtụtụ pests ndị ụlọ.
Ihe dị irè pụtara.
Otu karama zuru ezu iji gbaa mita 100 square.
Na-ekpochapụ mmadụ niile mgbe ọ na-ejighị otu.
Ọ nwere mmetụta dị ogologo oge.
Ejighị ihe ndị e ji eme ụlọ na ihe ndị e ji eme ihe na-adịghị mma.
Tupu ịwụnye ụmụ ahụhụ ahụ, a ghaghị ịdakwasị ha.
Nlekọta maka bedbugs Delta mpaghara dị ọnụ (750 rubles maka 50 ml).
Tụgharịa 25 ml nke uche na lita 20 mmiri. Wunye ihe ngwọta n'ime tank ahụ na sprayer na-elekọta niile ụlọ. Hapụ na awa 2-3, jiri mmiri mmiri na-asacha.
Foto nke Delta mpaghara ọgwụ:
Ngwurugwu Dutch na-agbanwe ohuru na mmezi ngwa ngwa.
Ọkụ ahụhụ ahụ na-ebibi ụmụ ahụhụ ngwa ngwa.
Enweghị ọgwụgwọ nke abụọ.
Enwe ego, oriri nke 100 ml ego na 100 square mita. m
Ọ nwere oge nchebe dị ogologo.
Ngwaahịa a nwere ísì ụtọ, nke ga-apụ n'anya n'oge na-adịghị anya.
Ọnụ ego dị elu nke ụmụ ahụhụ (1300 rubles kwa 100 ml).
Kalama 100 ml diluted na lita 20 nke mmiri oyi, wụsara n'ime akpa na a ịgba kalama na ịgba ụlọ. Mgbe ị na-edozi ihe niile ịchọrọ ịgbaso ntụziaka zuru ezu dị na karama ahụ.
Foto nke Zonder ọgwụ:
Ndị na-edozi ụlọ maka nchịkọta nke ụlọ ndị nwere bedbugs. Nwere pyrethroid permethrin.
Ngwá ahụhụ ahụ dị njikere maka nhazi.
Valid maka 15-18 ụbọchị.
Na-ebibi kpamkpam n'ógbè nke bedbugs.
Ezigbo maka nhazi ebe obibi na ebe siri ike na-eru.
Uzuzu dị ize ndụ maka ụmụaka na anu ulo.
O siri ike itinye ụmụ ahụhụ na ụlọ na ụlọ.
Riapan site na bedbugs na akwa oyi akwa ebe ebe bedbugs na-ahapụ maka 15-19 ụbọchị. Ghicha ya na mmiri na ncha.
Foto nke ọgwụ Riapan:
Na nkwusioru uche nwere zetapermethrin - kọntaktị pyrethroid.
Otu ebulu si bedbugs dịtụ ọnụ ala (370 rubles maka 50 ml).
Omume dị irè.
Enweghị isi ísì.
Ọ bụ ụmụ mmadụ na anụ ụlọ ha na-egbu egbu.
Ndị na-anaghị aṅụ ọgwụ na-eguzogide ọgwụ a.
Ekwesiri ibughari uche na mmiri.
Tinye 3,5,5 ml nke ụmụ ahụhụ na liter nke mmiri oyi, mix na-etinye n'ime akpa na a ịgba. Na-emeso ụlọ rụrụ arụ. Ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị kwa mita mita - 50 ml nke ọrụ ngwọta. Ọ dị mkpa ikuku ụlọ mgbe awa 2 gasịrị.
Foto nke ọgwụ Taran:
Ngwunye ahụhụ jikọtara ya n'ụdị mpempe mmiri ma ọ bụ mbadamba mmiri mmiri.
Ngwakọta nke ọgwụ ọjọọ abụọ na-arụsi ọrụ ike na-eme ka ọ bụrụ ndị na-egbu ọbara.
Ọrụ dị iche iche, ụyọkọ bedbugs na-egbu egbu.
Dị ka onye na-elekọta kọntaktị na-abanye n'ime ahụ.
Ọ dị ọnụ ala (100 rubles maka gram 10).
Ihe ngwọta bedbug nke Fas na-eme anaghị eme na nsen nsị, ya mere ọ chọrọ nhazi nke abụọ n'izu.
Tupu e jiri ya mee ihe, gbanye mmiri.
Fas si na bedbugs dị ize ndụ maka ndị mmadụ na anu ulo.
Mgbe emepechara ngwugwu ahụ, ọ ga-efunahụ ya.
Kwadebe ihe ngwọta dịka ntuziaka ahụ si dị, jiri mmiri ọkụ. Tinye mmiri mmiri ahụ n'ime karama ma kpaa ebe ndị nkịta bi. Hapụ maka awa atọ, wee jiri mmiri saa ahụ, mee ka ime ụlọ ahụ kwupụta.
Foto nke FAS:
Ngwunye insectidal nke nwere pyrethroid na boric acid.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi ísì.
Ọnụ ala (40 rubles kwa 100 grams).
Ọ bụ ụmụ mmadụ na anụ ụlọ dị ala.
Ọ bụ nanị na ọ bụ nanị obere ọnụ ọgụgụ ndị ọchịchị.
Adighi emetụta nsen.
Gbanye otu oghere n'ime akpa ma gbanye ntụ ntụ na ya n'ebe ndị nkịta dị ndụ. Ime phenaxine site na bedbugs nwere ike iwe ihe dị ka ụbọchị 24-27.
Foto nke ọgwụ Fenaxin:
Organophosphate nchịkọta zuru ụwa ọnụ, dị irè megide nnukwu mgbagwoju nke pests, gụnyere bedbugs.
Ọrụ na oge ọ bụla nke ndụ nkịta, tinyere nsen.
Ahụhụ na-abanye na ọ bụghị nanị site na kọntaktị, kamakwa site na usoro iku ume.
Ahịa ọnụ (900 rubles maka 800 gr).
Chlorofos dị iche na nchinchi na nsị nke siri ike maka ụmụ mmadụ na anu ulo.
A ghaghị ịmịnye ọgwụ na mmiri.
Ngwaahịa ahụ nwere ike dị mma.
Mee ihe ngwọta dị na pasent 1-2. Enwere ike igbanye ya ma ọ bụ tinye ya na brush, jiri nlezianya na-edozi ebe nile nke ndụ nke ndị ọkpụkpụ ọbara. Hapụ onye n'ụlọnga maka otu ụbọchị, gbasaa ụlọ niile ahụ ma sachaa ihe ngwọta ya na mmiri na ncha nke a tụgharịrị na ya.
Foto nke ọgwụ Chlorofos:
Pyrethroid na-arụ ọrụ na-eme ihe na bed chin na ha larvae. A na-enweta ya n'ụdị mgbochi mmiri, ntụsara mmiri ma ọ bụ mbadamba mmiri.
Ọ na-arụ ọrụ n'ụbọchị, na-ebibi ma ụmụ ahụhụ ma na-efe efe.
A na - eme ihe arụ maka otu ọnwa.
Ahụhụ anaghị emepụta onye na-elekọta gị.
Ihe ize ndụ maka azụ, anu ulo na ndị mmadụ.
Naghị emebi nsen.
Tupu ojiji, ịkwesịrị ịkwadebe ngwọta ọrụ.
Efu - 1500 rubles kwa 1 liter.
Ghichapụ tsipermetrin site na chin na mmiri dịka ntuziaka ndị a si dị, na-emeso ebe ahụ na sprayer ọma. Hapụ otu ụbọchị, kpochapu ya na soda na-agbaze n'ime mmiri.
Foto nke ọgwụ bụ Tsipermetrin:
N'etiti ụdị ọgwụ dị iche iche, ị nwere ike ịchọta ezigbo ihe maka gị ma na ọnụahịa ndị ọzọ.
Gụọ ihe ndị ọzọ banyere bedbugs:
Chọpụta isi ihe kpatara ọdịdị nke ndị na-agbapụta ọbara n'ime ụlọ ahụ, ya bụ ihe ndị na-ehi ụra.
Kedu ihe ụlọbugs yiri na otu esi ewepu ha site na iji ụzọ dịgasị iche?
Mụta ihe ha dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ? Kedu ka esi amata ha na-eri, karịsịa ụmụaka na otu esi edozi ebe ndị mebiri emebi?
Iji mesoo ụmụ ahụhụ ndị a n'ụzọ dị irè, chọpụta ụdị anụmanụ dị, otú ha si amụba ma na-eri nri, ebe ha ga-ahụ nests ha ma nwee ike ibi na uwe?
Gụkwuo banyere ọgwụgwọ ụmụ anụmanụ, akpan akpan mmanya na okpomọkụ.
Mgbochi dị irè.
Mụọ ọtụtụ nyochaa okwu banyere ụzọ kasị mma isi na-alụ ọgụ, karịsịa na ntanchi akwa. Ghọta onwe gi na ndepụta nke ihe ndi di mma nye ndi mmadu na anu ulo, ma muta otu esi edozi ulo ahu tupu ogwu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnagide nje ahụ n'onwe ha, anyị na-akwado ka ị kpọtụrụ ndị ọkachamara. Ha nwere ngwongwo mbibi dị irè ma ga - enwe ike inyere gị aka ozugbo enwere ike.
Ndị na-esonụ bụ ndepụta nke ọgwụ ọjọọ emepụtara nke ọma (enwere ike iji ya na onwe ya):
Powders na Dust: Ụlọ Dị ọcha, Malathion.
Sprays: Tetrix, Geth, Zifoks, Forsyth, Fufanon, Cucaracha, Hangman.
Aerosols: Raid, Raptor, Eguzo.
Gịnị bụ avian aspergillosis: mgbaàmà, nyocha na ọgwụgwọ
Akwa-ekwenye ekwenye na unpretentious dịgasị iche iche osisi apụl Kuibyshev
Dove onye Rom